Sakay (esorina ny voany ary tetehina manify)
Nofon-trondro 450g (tsy asiana hodiny ary zaraina 4)
Tongolo lehibe 1 (tetehina manify)
Tongolo gasy 2 tetehina manify
Sakamalao 2 sf (nokikisana)
Voatabia 1 zaraina 4
Voaisarimakirana (tsy voatery ho asiana)
Hafanaina ny lafaoro ka apetraka eo afovoan’ny lafaoro ilay “grille”. Atao eo amin’ny 220°C ny hafanana.
Asiana taratasy fahandro ny lasitra iray
Alahatra eo ambonin’io lasitra io ny legioma ka rarahina menaka oliva 1 sf.
Andrahoina mandritra ny 30 minitra fa tsy atao masaka loatra nefa.
Raha tsy manana lafaoro dia azo atao ihany koa ny mahandro ireo legioma amin’ny evo-drano
Mandritra izany fotoana izany, afangaro ny ranom-boasarimakirana, ny tamotamo ary ny sira sy dipoavatra.
Arotsaka ao ihany koa ny nofon-trondro, aroina tsara ary avela hilona mandritra ny dimy minitra eo ho eo.
Endasina ny tongolo, ny tongolo gasy sy ny sakamalao.
Arotsaka ao ilay trondro nalona teo, ny voatabia sy ny ron’akoho ary ilay tavim-boanio.
Avela ho ridritra aloha ilay saosy .
Esorina eo ambony afo dia avela hipetraka kely vao aroso miaraka amin’ny legioma sy ilay voasarimakirana notetehina efatra (raha toa ka nampiasa izany).
Ron’akoho tsy be sira no ampiasaina amin’ity nahandro ity. Tavim-boanio tsy matavy loatra ihany koa mba hifanaraka tsara amin’ny nahandro natao ho an’ireo diabetika. Ahitana gliosida 24g sy fibres 4g ao anatin’ny iray tasy amin’ity nahandro ity.